के तपाई रैनादेवी छहराको कर्मचारी हो ? तपाईकै बानीका कारण जागिर धरापमा
पाल्पा-के तपाई कर्मचारी हो ? त्यो पनि रैनादेवी छहरा गाउपालिका अन्तरगत विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीको जागिरे हो ? हो भने, कार्यालय समयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । यदि तपाई कार्यालय समयमा उपस्थित हुन सक्नु भएन भने, तपाईको जागिर अझै धरापमा छ । अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको जागिरे त मिनेटमा रिटार हुनुपर्ला, होस गर्नुहोस् । निजामति कर्मचारी भए सरुवा बढुवामा समस्या होला, वा अप्रभावकारी जिम्मेवारी सहित मानहानि होला । तपाई कार्यालय समयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा, हुनुभएन । त्यो पनि, पटक पटक, त्यसको त्यो खबर गाउपालिकाले दैनिक निगरानी गरिरहेको छ ।
रैनादेवी छहरा गाउपालिकाले स्वास्थ्य चौकी र माविमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गरेपछि कर्मचारी कार्यालय समयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । गाउपालिकाभित्रका कर्मचारीहरुले विदामा बसेका बेला समेत हाजिरी गरेपछि कार्यालय समयमा उपस्थित गराउने उद्देश्य सहित विद्युतीय हाजिरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याएसगै ठग कर्मचारी भने हैरानीमा छन् । विहान १० बजे नै कार्यालयमा आउने र साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयमा रहनुपर्ने बाध्यता त छदैँछ ।
रैनादेवी छहरा गाउपालिका–४, छहरास्थित स्वास्थ्य चौकीमा विद्युती हाजिरी मेसिनको पहिलोपटक गाउपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेपछि कर्मचारी मर्यादित हुनुपर्ने अनुरोध गरे । कार्कीले जनताका काम खटेर गर्नु र जनताका सेवा गर्न पाउने दायित्व सम्झेर काम गरेर नमुना बन्न कर्मचारीलाई अनुरोध गरे ।
बैशाखमा गाउपालिकाको दुई स्वास्थ्य चौकी सहित १२ माविमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सहित काम अघि बढको गाउपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर पराजुलीले बताए । गाउपालिकाले विद्युतीय हाजिरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँग कर्मचारीलाईे जवाफदेही र उत्तरदायित्व बनाउन सकिने अधिकृत थानेश्वर पराजुलीले बताए ।
प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले विहान १० बजे कार्यालय आउने समय र साँझ कार्यालय बाहिरिने समयमा ५ बजेसम्म विद्युतीय हाजिरी गर्नुपर्ने बताए । विद्युती हाजिरीमा औला छोएपछि हाजिरी हुने गर्दछ । कर्मचारी कार्यालय आउने समय भन्दा ढिला आउने र १० बजेको हाजिरी देखाउने, कार्यालयबाट दिउसो बाहिरिने तर साँझको ५ बजेको हाजिरी गर्ने परिपाटीको विद्युतीय हाजिरीले अन्त्य गर्ने गाउपालिकाले जनायो । पटक पकट कार्यालय समयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीको कारबाही हुने प्रअ पराजुलीले बताए ।
ढिलासुस्ती अन्त्य होला ?
विदामा बसेर हाजिर गर्ने, १२ बजे कार्यालय आएर १० बजेको हाजिर गर्ने वा ४ बजे कार्यालय आएर विहान र साँझको हाजिर गर्ने कर्मचारी नियमित कार्यालय समयमा उपस्थित हुन सक्लान । स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषि हुलाकका कर्मचारी सुध्रिलान, कार्यालय समयमा राजनीतिक गर्ने कर्मचारीलाई विहान १० बजे कार्यालय आएर दिनभर अन्यत्र गए विद्युतीय हाजिरी प्रभावकारी बन्ला, कर्मचारीलाई मानसिक रुपमा ठग प्रवृद्धि गाउपालिकाले रोक्ने सक्ला, रैनादेवी छहरा गाउपालिका जनताले हेर्न र कर्मचारीका असल काम, चरित्रका समचार पढ्न पाउलान ? स्थानीयबासिन्दा कर्मचारी सुध्रिए गाउपालिका, नियम र प्रक्रिया गत रुपमा अघि बढ्ला तर, त्यसका लागि जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सक्रियतामा भर पर्नेछ ।
कसरी हेरिन्छ दैनिक हाजिर ?
विद्युतीय हाजिरी जडान गरेपछि कति बेला, कुन कर्मचारी हाजिरी भयो भनेर गाउपालिकाले हेर्न सक्नेछ । कर्मचारीको दैनिक हाजिरी प्रिन्ट गरी कति बेला कर्मचारी आयो, कि आएन् भने निगरानी गर्नेछ । त्यो कर्मचारीको हाजिरी हेर्न जिम्मेवारी गाउपालिकाले प्रशासकी अधिकृतलाई दिएको छ । गाउपालिकाका प्रत्येक मावि र दुई स्वास्थ्य चौकीमा पहिलो चरणमा विद्युतीय हाजिरबाट कर्मचारी निगरानी गरिनेछ ।
प्रभावकारी बनाउन चुनौती
गाउपालिकाका कतिपय कर्मचारीहरु विवादित छविका छन् । उनीहरु काम र कार्यालयप्रति भन्दा राजनीतिक दल, ठेक्काप्रति बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । उनीहरुलाई कार्यालय समयमा उपस्थित भई अन्यत्र सक्रिय भएको पाइन्छ । गाउपालिकाले त्यस्ता कर्मचारीका ताला चावी कब्जा गर्न सक्ला, विद्युतीय हाजिर गरी अन्यत्र गएका कर्मचारीका थप अनुगमन गरे, प्रभावकारी हुने थियो की । यदि त्यो हुन सकेन भने हात्ती आयो, हात्ती फुस्सा होला ।
राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, पाल्पाको अध्यक्षमा ढकाल निर्वाचित
भैरव बहुमुखी क्याम्पसमा बेथितीको राज
तिनाउँमा गएको पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन पुग्यो
बेस नेपालले कोभिड प्रभावितलाई गरेको खाद्यान्न सहयोग तिनाउमा हस्तान्तरण